Suldaanka Guud Ee Beesha Arab Oo Qado Sharaf Ku Maamuusay Gudoomiyaha Shirkada TELESOM – WARSOOR
Hargeysa (warsoor) – Suldaanka guud ee beelaha Arab Suldaan Cumar Suldaan Maxamed Suldaan Faarax ayaa waxaa uu maanta munaasibad qado sharaf ah ku maamuusay gudoomiyaha Shirkada TELESOM Cabdikariim Maxamed Iid ka dib abaal marin caalami ah oo uu ku guuleystay.
Munaasibada qado sharafta oo ka dhacday Hotel Ambasadoor ayaa waxaa ka soo qeyb galay Ganacsato , Siyaasiyiin , Dhakhaatiir iyo Masuul ay ka mid yahiin Dr Saleeban Cabdi Guuleed iyo Ganacsade Xassan Bulbul mulkiilaha Hotel Hadhwanaag.
Ugu horeyn Suldaanka Guud ee beesha Arab oo madasha qado sharafta ka Hadley ayaa sheegay in ujeedka uu qadada u sameeyey ay tahay guusha balaadhan ee ay shirkada gudoomiyaha ka yahay u soo hoysay qaranka Somaliland , waxaana guul ay shirkada Telesom gaadho ku tilmaamay guul qaranka Somaliland gaadhay , waxaana uu kula dar daarmay in dadaalka halkaas ka sii wadaan.
Sidoo kale gudoomiyaha Shirkada Telesom Md Cabdikariim Maxamed Iid oo hadalka qaatey ayaa Suldaanka Guud ee Arab , Siyaasiyiinta iyo masuulyiinta qado sharafta lagu maamusay ka soo qeyb gashay uga mahad naqay maamuuska ay u sameyeen isaga oo si gaar ah ugu mahad naqay suldaanka guud ee beesha Arab Suldaan Cumar Suldaan Maxamed .
Ugu Danbeyn Suldaanka ayaa Gudoomiyaha shirkada TELESOM Gudoonsiiyey abaal marin uu ugu talo galay isla markaana uu ku sii dhiiri galinaayo.
Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya oo la kulmay Wasiirka Tacliinta Sare iyo Cilmi Baarista Masar